लकडाउनयता ६० गीत रेकर्ड गराउने व्यस्त गायिका! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लकडाउनयता ६० गीत रेकर्ड गराउने व्यस्त गायिका!
‘धन्न दसैं आयो र आफ्ना लागि थोरै समय पाएकी छु। नत्र त बिरामी हुँदा पनि गीत गाउनु पर्थ्यो,’ उनले टेलिफोन कुराकानीमा भनिन्।
उनले भनिन्, ‘ध्यान दिएर गीत सुन्नुभयो भने थाहा हुन्छ, यो गीतमा मेरो स्वर भासिएको छ।’यस्तो पहिलो पटक भने भएको हैन। यसअघि पनि स्वर बसेका बेला उनले धेरै गीत रेकर्ड गराएकी थिइन्। यसको मुख्य कारण उनको व्यस्तता नै हो। भनिन्, ‘एउटा गीत समयमा गाउन नसके अर्को गीतको समय हेरफेर गर्नुपर्ने हुनाले गाह्रो हुँदा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’
‘ज्वरो आयो, रुघा लाग्यो भन्न पनि नपाइने। कहिलेकाहीँ त आराम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो बेला तनाव हुन्थ्यो अनि आमा, दिदीसँग फोनमा दुख पोख्थेँ।’
थकाइ यति लागेको रहेछ कि शीतभन्दा निद्रा प्यारो भइरहेछ,’ एकछिनसम्म फोनमा उनको हाँसोको खित्का छुटिरह्यो।
सबै तस्बिर सौजन्यः रचनाको फेसबुक र सेतोपाटी बाट
‘जनता जान्न चाहन्छन्’मा रञ्जन कोइराला, पत्नीको ह’त्या मैले… भिडियो सहित